क्रिसमस बस कुना वरिपरि छ, र तपाईं बस समय हुनुहुन्छ आदेश गर्न एक क्रिसमस खाने । यो हुनेछ एक वास्तविक क्रिसमस संग राम्रो खाना छ । राम्रो खाना छ । एक कुशल होटेलको मुख्य भान्से । सबै धेरै मायालु अनुभवी. यो राम्रो यो बाटो । भेला मा आफ्नो परिवार र साथीहरू लागि एक साँझ को राम्रो खाना र पेय । हामी सेवा व्यवस्था र सबै को हेरविचार, र तपाईं समय बाहिर जाने र सँगै मजा. घेरिएको छ, सुखद वातावरणमा भनेर तपाईं आमन्त्रण गर्न व्यायाम छन्, प्रकृति ट्रेल्स, रोशन बाटो, एक गोल्फ कोर्स, स्नान र एक सुन्दर प्रकृति रिजर्व । आउन र यो आनन्द! आफ्नो मित्र आमन्त्रण लागि एक रमाइलो साँझ मा खेत.
बस जस्तै, घरमा तर बिना एक सञ्झ्यालको! क्रिसमस बस कुना वरिपरि छ, र तपाईं बस समय हुनुहुन्छ आदेश गर्न एक क्रिसमस खाने । यो हुनेछ एक वास्तविक क्रिसमस संग राम्रो खाना छ । राम्रो खाना छ । एक कुशल होटेलको मुख्य भान्से । सबै धेरै मायालु अनुभवी. यो राम्रो यो बाटो । आफ्नो मित्र आमन्त्रण लागि एक रमाइलो साँझ मा खेत. साँझ आनन्द संग एक राम्रो खाने र राम्रो पिउन । बस जस्तै, घरमा तर बिना एक प्लेट! त्यसैले, पछि एक लामो काम दिन, यो राम्रो हुनेछ आराम र आराम गर्न, एक जबकि लागि पचाउन सबै छापे. त्यसैले, खाने पहिले, तपाईं एक पाउनुहुनेछ विश्राम क्षेत्र संग एक सना र जक्यूजी.
पूर्ण बोर्ड देखि पाउण्ड स्टर्लिङ प्रति व्यक्ति
प्रवेश कोड मा साइट सोमवार लागि सारा एक सुअवसर को भाग हुन आफ्नो यात्रा । देखि पहिलो कफी तोड गर्न विवाहित जीवन, र त्यसपछि को भाग रूपमा हाम्रो आफ्नै । किनभने हामी प्रेम विवाह । गहिरो, निष्ठा, र सायद एक सानो पनि धेरै । हाम्रो आरामदायक परिवार कोठा छन् सजाया र एक डबल कोठा, र यो अर्को एउटा सानो कोठा संग एक बंक बेड मा । विशाल र आरामदायक कोठा संग मान्छे को लागि एक ठूलो क्षेत्र. यहाँ तपाईं राम्रो सुत्न,»सानो निद्रा लागेको मानिस»मा, सबै हाम्रो सहज -वा जेन्सेन ओछ्यानमा कोठा । यो आकर्षक र आरामदायक एकल कोठा छ सुसज्जित.
राम्रो सुत्न मा एक ओछ्यानमा भनिन्छ वा जेन्सेन
← पूरा तातो बालिका मान्छे स्थानीय विवाहित महिला मुक्त डेटिङ साइट
मा जान भिडियो मिति संग एक केटी बिना रेकर्डिङ →